फाल्गुन २५ गते मंगलबार, श्री गणेशको दर्शन गरी आजको राशिफल हेर्नुहोस – Namaste Host
March 9, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on फाल्गुन २५ गते मंगलबार, श्री गणेशको दर्शन गरी आजको राशिफल हेर्नुहोस
ज्यो. पं कुन्डल कृष्ण महाराज । आज मिति २०७७ फाल्गुन २५ गते मंगलबार । तदनुसार ९ मार्च २०२१ । श्री गणेशको दर्शन गरी आजको राशिफल हेर्नुहोस ।
मेष राशि-मेष राशि हुनेहरका लागि अाज प्रारम्भिक अबस्थामा मा अति प्रसन्नता रहला तर बिस्तारै कार्यमा थकान रहला केही उल्झन झमेलाहरुले घेर्लान कामकजमा पनि रुकवट रहला मतभेद युक्त दिन रहला थालेको कार्य मा ढिला सुस्ति रहला ।
बृषभ राशि -बृषभ राशि हुनेहरुका लागि सामाजिक तिक्तताका बाबजुद कार्य अाफ्नो पक्षमा रहला उच्चसाहस बल बुद्दिको प्रयोग रहला स्वजन मित्र हरुकोसहयोग रहला ।शिक्षा छेत्रमा पन सफल भईयेला यात्रापनि होला ।
मिथुन राशि-मिथुन राशि हुने हरुका लागि नया कार्यको थालनि रहला ।बाणिको प्रभाबले नयामार्ग प्रसस्त रहला ।हरक्षेत्रमा सफलता मिलला स्जन पाटनर सहयात्रि बाट लाभ रहला उच्चसम्मानको अबसर मिल्ला ।
कर्कट राशि-कर्कट राशि हुने हरुका लागि दिन मा अनेक अफर अाउनन मित्र जन या उचाधिकारिक‍ो बल मिल्ला कुनै भद्र कार्य वा सामाजिक सफल का्र्यको लाभ मिल्ला कुनै यात्रा मुुसाफरिको योग बन्ला ।
सिंह– नया ठाउको यात्राको योग छ, पुराना साथीसंगको भेटघाटले मन हर्षित हुनेछ, दिन रमाइलो छ । हाँसखेल, भ्रमण र मनोरञ्जनका क्रममा दिन बित्नेछ, टाढाको यात्राबाट केही धनको पनि आर्जन हुनेछ । व्यापार बढने यात्रा हुने र रमाइलो भेटधाटले मनलाइ हर्षित बनाउनुको साथै पराक्रम बढला ।
कन्या– स्वास्थय कमजोर हुनुको साथै काममा सफलता पाउन गारो पर्ला, सामान्य रोगब्याधले पनि सताउन सक्छ । समय मध्यमस्तरको छ । कुनै नयाँ समाचारले खिन्नता पनि बढ्न सक्छ, सोचेअनुरुप काम नहोला । स्वास्थ्यस्थितिमा अनुकूलता आउनेछ । काम गर्न जाँगर चल्नेछ, उत्साहवर्द्धक समय छ ।
तुला– अरुको काम धेरै गर्नु पर्ला जस पाउने सम्भावना कमै रहनेछ, काम गरे अनुसार फल भने थोरै मिल्ने समय छ । छर–छिमेकमा भने केही असमझदारी बढ्ने योग छ, तर खास हानि पुग्दैन, दिन ठिकै छ । परिश्रमअनुसार उपलब्धि पनि राम्रै पाइएला । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् दिन मध्यम खालको छ ।
वृश्चिक– स्वस्थ्ययमा सुधार हुने भयकोले नया काममा ध्यान दिएमा मान सम्मान मिलनेछ, । धार्मिक तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापबाट प्रतिष्ठा पाइनेछ । तर, शारीरिक अस्वस्थताको सम्भावना छ। आम्दानीमा कमी आउने छैन तर निरर्थक र प्रतिफल प्राप्त नहुने क्षेत्रमा धन लगानीको सम्भावना छ ।
धनु– बौद्धिक कार्यबाट थोरै भए पनि लाभ हुनेछ । व्यावसायिक काम बीचमा अवरुद्ध बन्न सक्छ । काममा केही चुनौती देखिए पनि प्रयत्न गर्दा समयको सदुपयोग भइ धनलाभ होला । विपरित लिङ्गीको सहयोग प्राप्त भइ मन हर्षित हुने योग छ, अनौठो खबर सुन्न्न पाइएला ।
मकर– कुराकाटनेहरु प्रसस्थ बढनेछन । ठूलाव्यक्ति हरुबाट आलोचना हुनेछ, कसैसंग बादविवादको पनि संभावना छ । परिवारजनमा असमझदारी बढ्नेछ, मान्यजन वा अभिभावकवर्ग रुष्ट हुनसक्छन् सावधान रहनु होला । धेरै लगानीपछि कममात्र फाइदा हुनेछ । समयमा होस नपुग्नाले केही चुनौती झेल्नुपर्ला ।
कुम्भ– हानी नै नगरे पनि काममा बाधा दिनेले खासै प्रगती हुन दिदैनन, जागीरमा पनि समस्या देखा पर्न सक्छ । धन मान पाउने योग छ । नोकरि तथा राजनितीमा आफनु बर्चस्व बढाउन सकिने छ । तपाइले गरेको कामाको कदर भइ प्रतिष्ठा बढ्ने छ, पढाइ तथा ब्यापारमा प्रगती हुने दिन रहेको छ ।
मीन– आजको दिनमा तपाइले सोचेको काम पुरा हुन सक्छ, साथे पाहुना आगमनको पनि योग रहेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व हासिल हुने योग छ । नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ । प्राविधिक काममा सफलता प्राप्त हुने छ । आत्मविश्वास जाग्नेछ, बैदेशिक क्षेत्रको लगानी खेर जादैंन ।
# फाल्गुन २५ गते मंगलबार
ॐ हरिशरणम् । यो सामान्य दिशा निर्देशन मात्र हो । सत्कर्म नै जीबनको एक लक्ष हो ।उद्यमीजनहरुले सदैब बिजय प्राप्त गर्दछन् ।
( ज्यो पं. श्री कुन्डल कृष्ण महाराजलाइ श्री हरिहर ज्योतिष सेवा, देवदह-७, शितलनगरमा भेट्न सकिन्छ । सत्यनारायण, दुर्गापुजा, लघुरुद्री, ग्रह शान्ति, ब्रतबन्ध, गृहवास्तु (घरपैंचो), लाखबत्ती, सप्ताह लगायतका शुभ कार्यका लागि चाहिने पुजा सामाग्री तथा ज्योतिष, वास्तु, कर्मकाण्डका सम्पुर्ण सेवाका लागि उहाँलाइ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । मो. न. ९८६८३४६८८९, ९८४७११७४३७, ९८२७४०६४५७ ।)